Ejypta: Ankizy Roa Notànana Ho Nanao Faniratsirana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2012 4:27 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Italiano, Ελληνικά, русский, English
Ankizy roa, sivy sy 10 taona, no notànana tao Ejypta, satria nolazaina fa nandrovitra avy amin'ny Kor'any ka nipisy tamin'izany. Tao an-tanàna ao Beni Souef, ao antampokavoana ao Ejypta, no niseho ny tantara, mpitondra fivavahana salafista no nametraka ny fitoriana ireo ankizy.
Araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana Ejypsiana, sokajiana ho heloka ny fanevatevana ny Islamo ao Ejypta ary notànana ireo ankizy noho ny fiampangana azy ho naniratsira boky Koràna. Naneho hevitra momba izany ny mpiserasera androany tao amin'ny Twitter.
Tsy faly tamin'izany vaovao izany i Tamer Mowafy[ar]:
@kalimakhus: Ahoana ny fihetseham-ponao raha vao mifoha maraina ianao no mahare vaovao fa ankizy roa no notànana, lavitry ny ray aman-dreniny, miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo noho ny ampondra nitory azy ireo?
Karim Masoud namaly hoe:
@K_Masoud: Raha mahazo alalàna manambady ny vehivavy eo amin'ny faha-sivy taonany, ara-dalàna raha azo enjehina noho ny faniratsirana ny ankiizy sivy sy folo taona.
Tsy nahita ambara i Amr Ezzat:
@AmrEzzat: Tsy hitako izay ambara. Ankizy roa, sivy sy 11 taona, avy ao Beni Suef no notànana ary hiatrika fitsarana noho ny fandrovitana boky Kor'any! Mitohy ny tantaran'ny fahadalànan'ny faniratsirana ity
Nandritra izany, Ishak Ibrahim nanamarika hoe:
@ishakassaad: Miha-mahazo vahana ny tranga faniratsiràna. Tahaka ireny olona te-hamboly olana sy hampisahirana ny vahoaka hitaky ny zony izy ireo.
@ishakassaad: Tsy manana atolotra ho an'ny Ejypsiana eo amin'ny sehatry ny fahamarinana ara-tsosialy ny politika Islamo. Izany indrindra no mahatonga azy ireo manakorontana mba hampisahirana ny olom-pirenena sy tsy hitsikera ny zava-bitany.
Nandefa hafatra ho an'ny filoha Ejypsiana Mohammed Morsi, izay mpikambana tao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana teo aloha i Demagh MAK. Hoy izy nisioka:
@demaghmak: Raha tsy mandray fanapahan-kevitra avy hatrany i Morsi mba hamoaka ireo ankizy roa avy ao Beni Suef voampanga ho naniratsira boky Koràna, ho fantantsika hoe iza no tena mpivarotena maloto.
Amin'ny Alahady izao no hiatrika fitsarana ireo ankizy.